SHARAXAAD KA MID AH QAABKA ISKU-JIRA EE CANAB "TRANSFORMATION" - VITICULTURE
Sharaxaad ka mid ah qaabka isku-jira ee canab "Transformation"
Ilaa hadda, tiro badan oo ah noocyada canabka ah ayaa la soo saaray oo dhammaantood waxay leeyihiin faa'iidooyin gaar ah, kuwaas oo ay helaan jacaylka beeraleyda. Ka mid ah noocyo cusub oo aan weli la galay diiwaanka gobolka ee noocyo canab, "Transformation" gaar ahaan muhiim ah.
Faa'iidada ugu weyn waa awooddeeda keenaan wax-soosaarka wanaagsan iyo sare ma aha oo keliya gobolka koonfurta, laakiin meelaha cimilada leh. Ma ahan wax cajiib ah, laakiin qoraaga noocyada canabka ah ayaa iska leh qashinka hiwaayadda, inkasta oo maanta noocyo kala duwan ay ka mid yihiin tobanka ugu sareeya ee ugu rajeynaya beerista Russia, Ukraine iyo Belarus.
Canab "Isbeddel" - waa hab lagu badalayo sawirkaaga
Canabkani waa xaqiiqo aan loo tixgelin noocyo kala duwan, laakiin waa halkan qaab isku mid ah oo canab ah, taas oo ku xigta xaalad ah kala duwanaansho kala duwan.
Shaki kuma jiro in isbedelka isbedelka uu si dhakhso ah u heli doono xaalad sidan oo kale ah, sababtoo ah caan uu u qalmo ayaa kor u kacaaya sababtuna tahay Bisaylkiisa hore berry, xajmiyo waaweyn oo kala duwan oo leh miro aad u fiican. Waxaa haboon in la xuso qaar ka mid ah canabkiisa "Isbeddel" dabiiciga muuqaalka oo dhadhanka la shaqeeya V. Kraynov - noocyo "Novocherkassk Anniversary" iyo "Victor".
Astaamaha canabkiisa iyo canabkiisa "isbeddel"
Wax-taas, iyo rucubyada canab ah si fudud ula yaab leh size iyo miisaanka. Gaar ahaan miisaanka celceliska hal farabadan waa 1 kiloSi kastaba ha ahaatee, waxqabadka ugu sarreeya wuxuu gaaraa 3 kiilo. Qaababka farabadani waa caadi ahaan qashin ama cylindrical, laakiin waxaa jira sidoo kale rucubyo aan kala go 'lahayn. Cufnaanta waxaa badanaa dhexdhexaad ah ama sheyli ah (noocyo badan oo ka mid ah kooxo aan qaabaysaneyn).
Laakiin xitaa more impressive waa xajmiga ee canabkiisa Transformation. Lahaanshaha qaabka aad u dheer, miisaankoodu waa 13.9 garaam. Miisaanka ugu badan ee berry waa 20 garaam, taas oo badan oo canab.
Cabbirka celceliska cowsku waa 3.6cm by 2.4 sentimitir. Caleemaha waaweyn ee foomka canabkani waxay leeyihiin midab jaalle ah ama jaalle ah oo jaale ah, taas oo aan si caadi ah dareemin marka la cuno, sababtoo ah waxay leedahay qaab dhuuban. Diirka ayaa sidoo kale lagu daboolay maro dhuuban oo dhuuban, kaas oo leh midab cufan.
Jidhkoodu waa mid aad u liidata, waxaa ku jira xaddi weyn oo casiir ah. Sidoo kale, ka kooban kiimikada waxaa ku jira 17-19 grams oo sonkor ah halkii 100 santimitir oo cabbir ah. Isla mar ahaantaana, tilmaamaha of acidity waa 6-7 grams oo kaliya 1 litir oo mugga. Dhadhanka canabku waa mid aad u jilicsan: macaan farxad leh oo isku dhafan oo leh xawaare yar. Sidoo kale, canab qurux badan ayaa leh caraf aad u fiican.
Noockan canabka ah waxaa loogu talagalay isticmaalka miiska. Maqaarka sare ee casiir iyo macaanka sonkorta ee saxarka siiyaan ku habboonaanta canabka wanaagsan ee winemaking. Sidoo kale, aad ayay u fiican tahay isticmaalka cusub.
Soo bixidda canab "Transformation" - maxaa la filan karo?
Canabka "Isbeddel" runta mid ka mid ah kuwa ugu caansan. Xilliga cimilada cimilada leh, canabkani wuxuu soo saarayaa goosashada ugu horreysa ee baadiyaha hooyada ee bisha Agoosto, oo canabkuna wuxuu ku dul wareegayaa badhtamaha bisha oktoobar.
Waa awooda lagu farxi karo goosashada buuxda ee buuxsameysa ee guurka ay u kala duwan yihiin noocyada kale ee canabka. Saameynta celceliska hal canug oo isku jira "Isbeddel" samee ilaa 20 kiilo oo miro ah. Cuntada waa mid deggan.
Burburkiisu wuxuu u kori karaa cabbir aad u ballaaran oo ah marka la barbardhigayo, iyo xididkiisa. Burburku wuxuu leeyahay awood aad u sareeya si uu u sameeyo caleemo. Caleemaha ayaa si fiican u hagaagsan. Pollination ayaa si madaxbanaan u qaadata, thanks to ubax bisexual. Sidoo kale, baadiyaha "Isku Beddel" waxay awood u leeyihiin in ay si fiican u qabsadaan xaaladaha sii kordhaya iyo cimilada cusub.
Faa'iidooyinka miraha hybrids "isbeddel"
Foomkan wuxuu leeyahay mudo bisleed hore, tan iyo markaas xilliga daaqsigu wuxuu soconayaa 110 ilaa 115 maalmood. Isla mar ahaantaana, dillaac of berry ee this canab si fudud loo go'aamiyey by si fudud u cadaadinaya - jilicsan ee berry iyo waa tilmaame ah qaan-gaar ah.
Tayada wanaagsan ee kala duwanaanshahan waa maqnaanshaha dhabta ah ee miro beeraleyda ka hoosaysa xaaladaha cimilada iyo tayada ciidda.
Isbeddelka canabka waa mid si aad ah ugu habboon nooc kasta oo rootstocks ah oo leh awood kor udhaca. Sidaa darteed, dhalatada ayaa si fudud loo fududeeyay.
Cadaadiska barafka "Dib u dhiska" ee ku saabsan sareeyaQoryaha oo aan waxyeello soo gaarin -0 ° C.
Noockan canabka ah waxaa loo tixgeliyaa gaar ahaan qiimo ahaan iyada oo loo eegayo suuq-geynta canabkiisa iyo beerihiisa, iyo sidoo kale ku haboonaanta gaadiidka fog-fog.
Dhinacyada xun ee canab "Transformation"
Inkasta oo ay ka horjoogsan tahay heerkulka hooseeya, xawaashka weli wuu u baahan yahay daryeel - ka hor bilawga barafka waa in si fiican loo daboolay.
Inta badan waxaa laga yaabaa in ay saameeyaan cudurada fangas dabeecada ah ee canabka ah. Muujiyeyaasha iska caabinta cudurrada waa 3.5-4 dhibcood.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo canabka cinjirka ah.
Tilmaamaha beeralayda si ay udhisaan geedo beerto "Transformation"
Ka hor inta aadan sii wadin beeritaanka tooska ah ee canabkiisa isbeddelka, waxaa muhiim ah in la baro nuxurka guud ee geeddi-socodka, iyada oo aan taas oo aan macquul aheyn in ay koraan baadiyaha sabiib ah oo wanaagsan.
Si aad u ciidda, foomka this canab ma aha gaar ahaan picky. Si kastaba ha noqotee, natiijooyin aad u weyn oo ku saabsan beerista canab kasta waxaa lagu gaari karaa ciidda madow ee bacrin ah.
Qoyaanku waa inaanay noqon mid xad dhaaf ah, laakiin qalajinta ayaa sidoo kale dhaawici doonta geedka canabka ah. Waxaa muhiim ah in la doorto ikhtiyaarka ugu fiican, oo leh heerka ugu hooseeya biyaha dhulka 1.5 mitir.
Marka aad dooranayso meel beeritaanka, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo awoodda nidaamka xididka ee baadiyaha sabiibta ah, kaas oo la sameeyey waqti ka dib. Sidaa darteed, waa inaysan jirin geedo waaweyn ama geedo kale oo u dhowsababtoo ah waxay la tartami doonaan canab si ay u helaan nafaqooyin.
Goobta dhulku waa in lagu iftiimiyaa habka ugu wanaagsan uguna firfircoonaan la'aanta dabaysha qabow ee waqooyiga. Sidaa darteed, fursada ugu fiican waxay noqon kartaa dhinaca koonfureed ee aqalka ama dhismaha kale ee goobtaada.
Shuruudaha iyo noocyada canab beerto "Isbadel"
Sida geedka kale, qaabka this canab ugu fiican ee la beeray guga.
Si kastaba ha ahaatee, natiijooyinka wanaagsan ee koritaanka canab ah ku siin karaan iyo in dayrta dayrta. Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo nooca aad dooratid marka uu soo dego. Ka dib oo dhan, canab ah waxaa lagu beeray karaa labadaba iyadoo la adeegsanayo geedo, iyo iyada oo loo marayo guntooda jarjar laga gooyay "geedka canugga" isbedelka kaydka ee noocyo kale oo sabiib ah.
Xaaladda kowaad, xilliga gu'ga waa ka wanaagsan yahay, tan labaad, wax kasta waxay ku xiran tahay xaaladda gooyaha iyo kaydka (madow waa gobolka nasashada, cagaarka horeba waa la kala diraa).
Sidee si habboon u beeri canab "Transformation" oo leh caawinaad ka mid ah sapling
First of dhan, waxaad u baahan tahay inaad soo qaado safo wanaagsan. Waa inay ahaataa:
Aan la qaboojin oo aan la qalajin, haddii kale si fudud ma awoodi karto inuu dego, ama waxay noqon doontaa mid aad u xanuun badan si ay u koraan. Wax soo saarka ah ee seedling noocan oo kale noqon doonaa mid aad u yar.
Midabka nidaamka xididka ee seedling waa caddaan.
Qaybta isdhaafka waa inay ahaato cagaar. Haddii kale, sapling sidoo kale ma noqon doono mid ku habboon.
Waxaa ka wanaagsan in qulqulo godad lagu beerayo fogaan ah 1-1.5 mitir. Qoto dheer ee ceelku waa inay noqdaan laba jeer oo ah xididdada seedling.
Xaqiiqdu waxay tahay in si loo hagaajiyo bacriminta carrada, waa lagama maarmaan waxaad u baahan tahay inaad sameysid ciidda bacrin ah lagu qaso organic (humus madax ama malax kaliya). On top of isku dar ah waa in weli la daboolay lakabka ah ee ciidda, iyada oo aan bacriminta. Sidaa darteed, isagoo qoday dalool, waxaan wali ku dhicin jiifsan sida nus sida bacriminta.
Kadibna waxaan hoos u dhignaa seedlingka godadka si ay qoorta xididku u ahaato mid aan ka hooseeynin heerka ciidda. Geedka abuurista waa in la diyaariyaa - biyo lagu qooyay ilaa hal maalin oo lagu daaweeyo kiciyaha kobcinta kobaca (daroogada "Gumat").
Ka hor inta aanad hoos u dhigin godadka, waxaa muhiim ah in la jarjaro talooyinka xididada yar oo la socdo. Ceelka waxaa lagu aasay si adag oo si ballaaran u waraabiyey. Wixii cabitaan, waxaad isticmaali kartaa ilaa 3 baaldiyo oo biyo ah.
Beerta Beerta "Isbeddel" leh gooyn
Waxaan hore u soo sheegnay in farshaxanimada loo qori karo "cagaaran" ama "madow". Intaa waxaa dheer, tallaalka waxaa loo fuliyaa labadaba stock kaydkii hore, iyo guga hore si ay u seexdaan. Laakiin, xaalad kasta, waa muhiim in la diyaariyo labada gooyn iyo stock hore.
Gooyn waa inay la socdaan 2-3 indhoodMaxaa ku filan koritaanka wanaagsan. Saldhigga waxay u baahan yihiin in la gooyo, oo kaliya dhowr millimitir oo u dhiganta kuwa ugu hooseeya.
Waa in la gooyaa qaab laba dhinac ah. Ka hor inta aan la jarin, gooyuhu waa inuu biyo ku jiraa dhawr maalmood, waana in sidoo kale lagu qooyay xalka "Humate" (xalka ugu yar ee 10 dhibcood halkii litir oo biyo ah ayaa loo isticmaalaa).
Marka canabku waa la qallajiyey xilliga dayrta, waxaa muhiim ah in ay wax ka qabato sidaas darteed qoyaanku si fiican ayuu u ilaaliyaa iyaga iyo si ay u kordhiyaan caabbinta dhaxan. Sidaa darteed, goynta daqiiqad yar oo la gooyo oo la gooyey oo la shiidaykadibna ku qaboojiyey biyo qabow.
Maqaalka waa in marka hore la gooyaa, sidaas darteed ka saarto baadiyaha hore. Dheeraad ah, waxaa si taxadar leh u kala jajaban si kali ah oo loo jarjarayo oo ku habboon meelaha kala duwan (haddii kaydka uu yahay mid ballaadhan oo ballaaran, waxaad xitaa qallajin kartaa 2-3 gooyn). Dusha ayaa si taxadar leh loo nadiifiyaa si sahlan.
Dheeraad ah, jarida waxaa la dhigayaa meelo kala gedisan, saameeyaha si adag ayaa si adag loo riixay si loo sii hagaajiyo booska xiriirka u dhexeeya jarida iyo jarjar dhireedka.
Waxay u fiicantahay in la dhigo saamiyada leh dharka suufka ah, taas oo wax u dhimeysa sannadka soo socda.
Xilliga jiilaalka, goobta tallaalka waxaa lagu dhajiyaa dhoobo.
Xeerarka daryeelka ee canab ee kaa caawin doona kordhinta wax-soosaarkooda
Viticulture waa ganacsi dhib badan, taas oo, si kastaba ha ahaatee, waxaa si fiican loo abaalmariyaa dalagyo wanaagsan oo dhadhan fiican leh. Si loo gaaro natiijooyinka ugu sarreeya ee "Isbeddelka" canab, waa muhiim in aad si taxadar leh u baadho baadiyaha oo ha iloobin inaad biyo u cabto, quudiso oo sameyso manjooyin joogto ah. Sida saxda ah ee loo sameyn karo waxaa lagu falanqeyn doonaa hoos.
Maxaad ubaahan tahay inaad ka ogaatid waraabinta saxda ah ee canab?
Canab, inkastoo ay u baahan yihiin qoyaan ciid wanaagsan, Qiyaaso badan oo biyo ah ayaa noqon kara kuwo dhimasho ah labada for geedka qudhooda iyo dalagga guud.
Waraabinta joogtada ah waxaa lagula talinayaa kaliya ka hor ubax of baadiyaha sabiib ah, iyo dhamaadka muddada this. Kordhinta waraabinta waa kaliya inta lagu jiro xilliyada abaarta daran. Waqtigaan, waxaa habboon in la qodo dalool dalool ah (qiyaastii 5 sentimitir qoto dheer) hareeraha jirridda iyo waraabinta. Sidaa darteed, ciidda waxaa lagu qasi doonaa in ka badan ama ka yar siman.
Haddii ay dhacdo roobab badan oo culus inta lagu jiro samaynta iyo dillaac of goosashada sabiib ah, waxaa lagama maarmaan ah in la qodo godadka dheecaan ama qodaya. Waxay daadi doonaan qoyaan xad dhaaf ah, taas oo saameyn ku yeelan karta dhadhanka canab "Transformation".
Qallajin iyo dhar xidhis si loo hagaajiyo tayada ciidda
Mulching wuxuu door muhiim ah u leeyahay canab koraya. Waxaa la qabtaa kaliya guga iyo dayrta, sababtoo ah xagaaga waxay keeni kartaa uumi u ah nidaamka xididka ee baadiyaha a sabiib ah. Inta lagu jiro mudadaas, ma aha oo kaliya hayn qoyaan ee ciidda, laakiin sidoo kale waxay ku darsataa maaddooyinka lagama maarmaanka u ah canab.
Wixii mulching waxaa loo isticmaalaa humus, haddii ay dhacdo of maqnaanshaha - peat. Bixinta lakabka mulch waa ka fiican lakabka ah 3 sentimitir, adeeca dhexroorka nidaamka xididka geedka canabka ah. Aad bay muhiim u tahay mulchin ka hor bilowga bilawga ah, maxaa yeelay lakabka mulch wuxuu ilaalin doonaa canab ka soo dhaxan.
Bacriminta Phosphorus-potassium ayaa sidoo kale loo isticmaalaa quudinta canab, kuwaas oo lagu taliyey in lagu dabaqo guga ka hor ubax.
Sidee loo daboolaa canab?
Sababtoo ah qaabkan noocan ah ee canabkuna waa mid dhirta lagu beeray, dulqaadka dhaxanta ee dhexda dhexe ayaa daciif noqon doona. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daboolo canabka "Isbadel" xilliga qaboobaha. Tani, inta badan geedka canabka ah (qiyaastii 75%) ayaa laga saaray. Ugu fiican baadigooba dhulka oo ku rusheey carrada. Xagga ciidda waxaa lagu dabooli karaa hay, adoo ku lifaaqan boodh ama dhererka sare.
Dhirta yar yar iyo sayniska ayaa daboolaya wax badan. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa tuubadii hore, taas oo horeba hoos u dhigtay hoosta. Iyadoo ay ku dhisantay canab, carrada waxaa lagu shubay gudaha ilaa ilaa seedling uu gebi ahaanba xiro ciidda. Xaaladdan oo kale, carrada waa ka fiican tahay in la xiro si looga fogaado dhaawaca canabka.
Xeerarka loogu talagalay gooyo geed canab "Transformation"
Canab dhoobo waxaa loo fuliyaa ujeedooyin badan. Marka hore, iyada oo ay caawinayaan baadiyaha canab ah waxaa la aasaasay. Marka labaad, dhalidda ayaa la xakamaynayaa, maaddaama ay xaddi badani ay saameyn karto tayada. Saddexda, gooyaa waxay gacan ka gaysataa kicinta caleemaha canabka.
Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo xilliga dayrta. Haddii, si kastaba ha ahaatee, gaabisaa laamaha geedka canabka ah ee guga, ka dibna waa in la sameeyaa ka hor inta uu ubaxu. Qaababka baadiyaha waa taageere la doorbido. Sidaa darteed, kooxo canabka ah ayaa si fiican loo dhisi doonaa. Dhererka geedka canabka khudaarta si joogto ah ayaa loo soo gaabiyaa ilaa 6-8 burooyinkooda, iyadoo leh tirada ugu wanaagsan ee caleemaha 24-35 gogo '.
Si aan u badin baadiyaha leh tiro badan oo canab, waxaa sidoo kale muhiim ah in laga saaro. Waxay u fiicantahay inaad ka baxdo hal farabadan oo ku saabsan hal xayiraad. Qaar badani waxay sidoo kale ka saaraan inflorescences ee tallaabooyinka, isku dayaya in ay hagaajiyaan dalagga ugu muhiimsan.
Canbaarta cayayaanka ee "Isbeddel"
Foomkan isku dhejisan ee canabku wuxuu leeyahay celcelis ahaan iskahorimaad si loo jabiyo cudurada fangasta kala duwan. Wixii ka hortag ah waxaa muhiim ah in la sameeyo ugu yaraan 2 xabbo xilli hal xilli.
Maaddooyinka, xalalka la buufiyo, waa fungicides iyo gaar ahaan Bordeaux isku dar ah, diirada oo aan ka badnayn 1%.
Xeerarka beerashada iyo daryeelka ee strawberries "size size"
Noocyo baradhada Ruushka Fortune: ugu horrayn, ugu delicious!
Ukunta ukunta: waxa ka duwan digaag, sida faa'iido leh, sida loo kariyo
Waa maxay biyaha si ay biyo u cabbaan
Dad badan ayaa xasuusiya caruurnimada sida loo daweeyay daboolka macaan iyo sharoobada malab. Dhibaatadan dadkan waxay u adeegsataa habboonaanta illaa maanta, sida dalagga xididku uu leeyahay hal unug gaar ah oo waxtar leh cudurada kala duwan. Sida loo sameeyo dabocase daweyn leh malab qufac leh oo carruurta ku bartaan maqaalkeenna. Read More
Koraaya ubax aan caadi ahayn hymenocallis